चिस्सिँदैछ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, यसरी बचाउनुहोस् प्रेम ! - IAUA
चिस्सिँदैछ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, यसरी बचाउनुहोस् प्रेम !
ramkrishna October 9, 2020	interesting
पछिल्लो वर्ष वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्वभरी नै सम्बन्धविच्छेदको घटना बढीरहेका छन् । दुई व्यक्तिबीचको आपसी सहमतिमा विवाह हुन्छ । अनि मत नमिलेपछि सँगै बस्नुको औचित्य नदेखेका उनीहरु टाढा हुन्छन् ।
पछिल्लो समय समाजमा व्याप्त विभिन्न बानी र संस्कारले वैवाहिक जीवनमा निकै दरार आउन थालेको छ । महिलाहरुलाई आफ्नो हक अधिकारबारे थाहा भएका कारण पनि अब पहिले जस्तो सहेर बस्ने भन्ने हुँदैन । र सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । सानोतिनो मनमुटाव पछि दम्पत्तिहरु विकल्प खोज्नतिर लाग्छन् । र, पहिलेको सम्बन्धलाई बिच्छेदको बाटो दिन्छन् ।
विशेषतः विवाहत्तेर सम्बन्ध, गरिबी, लागूऔषध प्रयोग, दुव्र्यसनी, शारीरिक र मानसिक अशक्तता, सम्बन्धमा आएको दरारपन आदी कारण नै अहिले सम्बन्धविच्छेदको मुख्य कारण बनेको छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, कि वैदेशीक रोजगारीको कारण पनि विश्वभरीनै सम्बन्धविच्छेदको घटना बढीरहेका छन् । यो अर्थमा भन्ने हो भने वर्षौसम्मको मतभेद, अलग बसाई र लामो समयसम्म पनि सम्पर्कमा नरहेका कारण पनि जोडीहरु छुट्टिन चाहिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय वैदेशीक रोजगारीले पनि सम्बन्धलाई निकै डरलाग्दो बनाइरहेको छ । युरोपको सबैभन्दा सानो देश लग्जमबर्गको जनसंख्या ५ लाख मात्रै छ । तर यहाँ ८७ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ । रुस यस्तो देश हो, जहाँ हरेक एक सेकेन्डमा एक जोडीको सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । यहाँको एक तिहाई विवाह जम्मा पाँच वर्ष मात्रै टिक्छ । भारतमा एक हजार विवाहमा १३ जनाको सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ । स्पेनमा पछिल्लो केहि वर्षमा स्पेनको आर्थिक अवस्थामा आएको उतारचढावका कारण सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ । इङ्ग्लान्डमा पछिल्लो केहि वर्षमा सवा लाख जोडीको सम्बन्धविच्छेद भएको अनुुसन्धानमा खुलेको छ ।
अमेरिकामा सम्बन्धविच्छेदको कारण दोस्रो विवाह भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अमेरिकामा दोस्रो विवाह गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । नेपालमा पनि सम्बन्धविच्छेद बढीरहेको छ । चर्चित ३ जोडीको डिभोर्स भयो २०१९ मा । अब हाम्रा सामू पनि गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ समबन्ध कसरी बचाउने रु तपाईको त्यो समस्या मसाधानको लागी लोकपथ डटकमले केही टिप्स जम्मा पारेको छ । जुन निम्नानुसार छ ।
-अरु मानिसले के भन्लान् भन्ने सोच्नु हुँदैन ।
-अधिकार र कर्तव्यलाई एउटै तुलोमा राख्नुपर्छ ।
-कसलाई के कुरा मन पर्छ त्यो खुलेर एकअर्कामा राख्न सक्नुपर्छ ।
-आफू बाहिर कतै घुम्न गएको छ भने फर्कँदा मनपर्ने कुरा किनेर ल्याईदिनुपर्छ ।
-कतै बाहिर निस्कँदा बेलाबेलामा फोन गरिराख्नुपर्छ ।
-अफिसमा छ भने बेलाबेलामा फोन गरेर खाजा तथा खाना खाए नखाएको सोध्ने गर्नुपर्छ ।
-छरछिमेकले कुरा काट्लान भनेर सोच्नु हुँदैन ।
-आइपरेका समस्याहरु मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।
-एकअर्कामा कुराहरु शेयर गर्नुपर्छ ।
-बहिरका मान्छेलाई घरका कुरा सुनाउन हुँदैन ।
-एक अर्काले एकआपसमा समय मिलाएर घुम्न जाने तथा सँगै बस्ने गर्नुपर्छ ।
-एक अर्काले सम्बन्धलाई गाढा बनाउन जे छ, त्यसमै सन्तोष बन्न सक्नुपर्छ ।
-यो भन्दा राम्रो मलाई हुनै सक्दैन भन्ने भावना मनमा राख्नु पर्छ ।
-एकआपसमा मीठो गरेर बोल्नु पर्छ ।
-पतिपत्नीमा सम्बन्धलाई मीठो बनाइराख्न एक अर्काले गरेको कामको तारिफ गर्नुपर्छ ।
-शंकाको वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन ।
-समस्या आईपरे, रोगी भए, दिर्घकालीन रोग लागेपनि माया ममतासँगै बाँच्नुपर्छ ।
-एक अर्कालाई सम्मानसहितको प्रेम गर्नुपर्छ ।
-एक अर्काको सपना साकार पार्न जतिसक्दो लाग्नुपर्छ ।
-दुई जनाबिचको सम्बन्धमा परिवारका अरु सदस्यको कारण देखाई वैमनश्यता सिर्जना गर्नु हुँदैन ।
-हतारमा निर्णय लिँदा फूर्सदमा पछुताउनुपर्छ । विवाह, सम्बन्ध, करिअर जस्ता कुराहरुमा निर्णय लिँदा निकै सुझबुझसाथ अभिभावकको सल्लाहमा मात्रै निर्णय लिनुपर्छ ।
-सम्झनुहोस् उ विना तपाई पूर्ण हुनुहुन्न र तपाईविना उ ।
-सम्बन्धमा जब विकल्प खोज्न थाल्नुभयो तब सोच्नुहोस् तपाईले नराम्रो बाटो पक्रिनुभयो ।
-हरेक कुरामा ‘पर्फेक्ट’ हुन्छ वा चाहियो भन्ने भाव राख्नु हुँदैन ।
– जीवनमा सम्झौता पनि गर्न जान्नुपर्छ ।
Previous Previous post: यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने झुक्किएर पनि नलिनुहोस् रक्सीको नाम !
Next Next post: तपाईंको पनि गर्लफ्रेण्ड छैन ? त्यसो भए यो अवश्य पढ्नुहोस्